Nagarik News - 'मनमोहन विधेयक नफर्काए आन्दोलन'
'मनमोहन विधेयक नफर्काए आन्दोलन'
25 Jan 2016 | 07:06am
काठमाडौं-चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त विकृतिको विरोध गर्दै यसका लागि भएको सुधार प्रयासमा सघाउने गरी देशका विभिन्न क्षेत्र र पेसामा संलग्न नागरिक अगुवा आन्दोलिन भएका छन् ।
चिकित्सा क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षणले मौलाएको 'मेडिकल माफिया' विरुद्ध संगठित रुपमा आवाज उठेको हो । राजनीतिक संरक्षण र माफियाको प्रभाव र प्रलोभनमा परेर मनपर्दी गर्दा पनि समाजका विभिन्न पेसा र व्यवसायका नागरिकले व्यक्तिगत रुपमा बाहेक संगठित रुपमा आवाज मुखरित गरेका थिएनन् ।
पछिल्लो पटक निजी लगानीमा सञ्चालित अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा पढाउने गरी अनुमति दिन सरकारले ऐन नै बनाएर संसदमा पु¥याएपछि उनीहरुले सरकारको यो कदमविरुद्ध उठ्न आम नागरिकलाई समेत आग्रह गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी गत वर्ष गठित कार्यदल संयोजक एवं त्रिवि उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अगुवाइमा आइतबार ४५ भन्दा बढी नागरिक अगुवाले सरकार र संसदको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकार र संसदका नाममा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा नाफामूलक संस्थालाई प्रतिष्ठानको स्वरुप दिने गरी संसदमा पुगेको विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । नाफामूलक संस्थाविशेषका लागि संसदले छुट्टै ऐन जारी गर्दा चिकित्सा शिक्षामा नयाँखाले विकृति सुरु हुने भन्दै अगुवाहरुले अन्यथा कडा आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिए ।
उनीहरुले सोमबारदेखि आठांै आमरण अनशनको घोषणा गरेका डा.गोविन्द केसीलाई समेत तत्कालका लागि अनशन रोक्न आग्रह गरेका छन् । अगुवाहरुले सरकारले विधेयक फिर्ता नलिएर केसीको अनशनमा साथ दिने उद्घोषसमेत गरे । ध्यानाकर्षण पत्र तयार गर्नुअघि शनिबार राजधानीमा भेला नै गरेर उनीहरूले यस्तो रणनीति बनाएका थिए ।
अभियान अगुवाइकर्ता माथेमाले ऐक्यबद्धताका लागि व्याप्त चासो र इच्छा जाहेर भइरहेको भन्दै अभियान विस्तारसहित दबाब बढाउँदै लाने योजना रहेको सुनाए । उनले सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदन, संसदीय मर्यादा र सामान्य नैतिकतालाई समेत बिर्सिएर सत्ता र संसदको दुरुपयोग गरेपछि बाध्य भएर यस्तो कदम चाल्नुपरेको बताए । 'यो विकृतिविरुद्ध उठेको आवाजलाई एकीकृत गर्ने जमर्को मात्रै हो,' उनले भने ।
सम्बन्धनका लागि सत्ता र राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग गर्दै सम्बन्धन पर्खाइमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस पढाउने स्वीकृति संसदमा रहेको शक्तिको समेत दुरुपयोग गरी विधेयक लगेपछि पछिल्लो चेतावनी आएको हो । सरकारले संसदमा लगेको विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव र संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव दुवै पास भइसकेका छन् ।
पछिल्लोपटक विधेयक पुगेको संसदको महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा मनमोहनकै सञ्चालकहरुको वर्चस्व छ । उनीहरुले विधेयक पास गर्न अन्य दलका प्रमुख सचेतक एवं समितिमै रहेका सासंदलाई भेटेर अवरोध नगर्न भन्दै लबिङसमेत गरिरहेका छन् । माथेमाले संसदीय समितिमा स्वार्थको द्वन्द्व सृजना भएकोसमेत औंल्याए । 'त्यति सम्मानित नेताको नाममा सरकारी कलेज खोल्ने हो भने कसले विरोध गर्छ ?' उनले भने, 'नाफामूलक संस्थाका लागि छुट्टै कानुन बनाउन खोज्नु प्राज्ञिक मान्यता र मर्यादाविपरीत छ ।'
हस्ताक्षरकर्तामा पूर्व मन्त्रीहरुदेखि, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, पूर्व निर्वाचन आयुक्त, सरकारका मुख्य सचिव एवं सचिवहरु, चिकित्सक प्राध्यापक, अधिकारकर्मी एवं वरिष्ठ पत्रकारसमेत छन् । उनीहरुले देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई यो दबाबमूलक अभियानमा साथ दिन आह्वान गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल भएको भन्दै यी उपलब्धिसँगै पछिल्ला वर्षमा थुप्रै विकृति र विसंगति चुलिँदै गएको समेत उल्लेख गरिएको छ । 'विकृतिले जनताको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवालाई नै जोखिममा पार्दै लगेको छ,' ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
उनीहरुले विकृतिको पृष्ठभूमिमा चिकित्सा शिक्षामा देखिएका चुनौतीलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले करिब एक वर्षअघि केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको स्मरण गराएका छन् । 'उक्त कार्यदलले चिकित्सा क्षेत्रका विद्यमान समस्या र भविष्यमा आइपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा नीति सिफारिस गरेको थियो,' पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलकै सिफारिसका आधारमा माघ ८ गते मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको आयोगको भने स्वागत गरेको छ । उनीहरुले यही आयोगले तयार पार्ने चिकित्सा शिक्षा नीतिलाई ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्न मागसमेत गरेका छन् । 'नेपाल सरकारले एकातिर माथेमा प्रतिवेदनका प्रमुख सिफारिसको अपनत्व ग्रहण गरी त्यसकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको छ भने अर्कातिर यो प्रतिवेदनको सुझाव र मर्म प्रतिकूल हुने कदम पनि चालेको छ' पत्रमा भनिएको छ, 'एउटा नाफामूलक निजी संस्थालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूप दिन कानुन नै निर्माण गर्ने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ ।'
अगुवाहरुले निजी संस्थालाई प्रतिष्ठान बनाउने कदम विश्वव्यापी प्राज्ञिक मूल्य, मान्यता र मर्यादाविरुद्ध र राज्यले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गरेका प्रतिबद्धताविरुद्ध भएको ठहर गरेको समेत पत्रमा जनाएका छन् ।
अगुवाहरुले कुनै पनि नाफामूलक संस्थालाई प्रतिष्ठान बनाउने गरी छुट्टै कानुन निर्माण गर्नु कानुनकै सिद्धान्तविपरीत काम भएको भन्दै यस्तो कामले गरिमामय संसदको नै अवमूल्यन हुने बताएका छन् ।
यो नजिरले चिकित्सा क्षेत्रमा भविष्यमा थप विकृति र जटिलता ल्याउने निश्चित रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा 'उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसामु तथा त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन सम्मानित व्यवस्थापिका संसदसामु हामी जोडदार माग गर्दछौं' लेखिएको छ ।
अगुवाहरुले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत नै चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि सोमबारदेखिको घोषित आमरण अनशन कार्यक्रम फिर्ता लिन डा. केसीसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले केसीको लडाइँप्रति सराहना गर्दै डा. केसीले आठौंपटक अनशन बस्नु नपरीकनै सरकार र संसदले जिम्मेवारीपूर्वक उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने वातावरण मिलाउनेछन् भन्ने अपेक्षा आफूहरूले राखेको पनि जनाएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विश्वव्यापी प्राज्ञिक मूल्य, मान्यता, मर्यादा र राज्यले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गरेका प्रतिबद्धता विपरीत ल्याइएको यो विधेयक फिर्ता गर्न सरकार र संसदले पहलकदमी लिएनन् भने उक्त विधेयकविरुद्ध आफूहरु डा. केसीसँगै उभिनेसमेत जनाएका छन् । यो अवस्था आए यसले ल्याउने परिणाममा सरकारकै जिम्मेवारी हुनेसमेत उनीहरुले जनाएका छन् ।
अगुवाहरुले आम नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको यो अभियानमा सरिक हुन आह्वान गरेका छन् । त्यसका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाउने र अनलाइन हस्ताक्षर अभियानका लागि चेन्ज डट ओआजीमार्फत पेटिसनसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा माथेमासहित चिकित्सा शिक्षा कार्यदलका हस्ताक्षरकर्ता केयुका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्मा, आइओएमका पूर्व डिन डा. मदनकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी मंगलसिद्धि मानन्धर, निलाम्बर आचार्य, जयराज आचार्य, चैतन्य मिश्र, अभि सुवेदी, महेश उपाध्याय, खगेन्द्र भट्टराई, कुलचन्द्र गौतम, डा. उपेन्द्र देवकोटाले समेत हस्ताक्षर छ । त्यसैगरी अनुराधा कोइराला, दमननाथ ढुंगाना, हरिवंश आचार्य, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, कृष्ण खनाल, भोजराज पोखरेल, विमल कोइराला, लीलामणि पौड्याल, रामेश्वर खनाल, दीपक ज्ञवाली, नविन प्रकाशजंग शाह, विश्वम्भर प्याकु¥यालले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । ध्यानाकर्षण गराउने अन्य अगुवामा ध्रुवचन्द्र गौतम, केदारलाल श्रेष्ठ, विद्यानाथ कोइराला, मनप्रसाद वाग्ले, डा. सरोज धिताल, पुकार मल्ल छन् । त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल, किशोर नेपाल, युवराज घिमिरे, नारायण वाग्ले, प्रतीक प्रधान, कुन्द दीक्षित, शिव गाउँलेले समेत समर्थन जनाएका छन् ।
अभियानका अन्य हस्ताक्षरकर्तामा खगेन्द्र संग्रौला, सिके लाल, प्रत्यूष वन्त, यादव खरेल, कपिल श्रेष्ठ, विनोद सिंजापति, शेखर खरेल, सलोनी सिंह लगायत छन् ।